Fomba 5 handresena ny tahotra amin'ny maha mpino | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Fomba 5 handresena ny tahotra amin'ny maha mpino
Androany isika dia hiatrika fomba 5 handresena ny tahotra amin'ny maha mpino antsika. Ny tahotra dia ny fisian'ny tebiteby na ny te hahafanta-javatra nateraky ny fahatsapana ny tsy fahatokisana. Isika rehetra dia manana ny tahotra ananantsika, tsy misy lehilahy ateraky ny vehivavy tsy matahotra. Matahotra zavatra be dia be isika. Matahotra ny olona sasany sao tsy hahomby amin'ny fiainana. Amin'ny vanim-potoana feno fitiavana dia natahoran'ny tahotra sao tsy hahomby izy ireo. Indraindray io tahotra io dia lasa lasantsy mampiorina ny sasany hanao zavatra lehibe amin'ny fiainana. Na izany aza, ny antontan'isan'ny olona izay voataona tsara amin'ny tahotra dia tsy misy dikany raha oharina amin'ireo izay nanjary nandrava noho ny tahotra.
Natahotra mafy i Jona Mpaminany taorian'ny nanirahan'Andriamanitra azy hitory. Tototry ny tahotra izy fa tsy maintsy mankatò ny torolalan'Andriamanitra. Nandeha lalana hafa izy satria sahirana be tao am-pony. Betsaka ny aina sy ny fiafarana naringana teo amin'ny alitaran'ny tahotra. Zava-dehibe ny fahalalana fa ny tahotra tsy mandeha irery, miaraka amin'ny fanahiana sy ny fanahiana izany. Ny fisian'ny ahiahy dia miteraka olana izay tsy nisy teo aloha. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i 2 Timothy 1: 7 Fa Andriamanitra tsy nanome antsika ny fanahy osa; fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena.
Alohan'ny handehanantsika dia andao asongadino haingana ny sasany amin'ny voka-dratsin'ny tahotra eo amin'ny fiainan'ny mpino.
Voka-dratsy ateraky ny tahotra amin'ny mpino
Lasa mpiremby goavambe ilay fahavalo
Ny tahotra dia mahatonga anao ho rembin'ny fahavalo. Betsaka ny olona nosakanan'ny fahavalo ny ainy noho ny fanahin'ny tahotra. Rehefa tratry ny fanahin'ny tahotra ianao, dia tsy ho fantatrao na ho hitanao fa manana fampanantenana marobe Andriamanitra ho anao.
Izany dia mahatonga ny fahavalo ho lasa mpiremby. Isaky ny manandrana mitady ny lalana hiverenanao amin'ny hazo fijaliana ianao dia mampahatsiahy anao ny lasa ny fahavalo ary lasa matahotra be ianao ka tsy fantatrao akory izay hatao.
Mahatonga tsy filaminana izany
Efa nahita lehilahy na vehivavy natahotra nefa milamina ve ianao? Izay lehilahy manelingelina ny fiainany dia hitady vahaolana foana ny olona toy izany. Mandritra izany fotoana izany, ny lehilahy toy izany dia lasa marefo ary mety ho diso lalana na diso lalana amin'ny zavatra mahatsiravina kokoa noho ny atahoran'izy ireo.
Betsaka ny olona no nanadino ny mpamorona azy, nanadino izy ireo fa nandatsaka ny rà teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvary ho fanavotana ny fahotany i Kristy. Manomboka mitady vahaolana amin'izay tsy misy azy ireo izy ireo.
Mety hitarika ho amin'ny fahafatesana tampoka izany
Ny tahotra no mpamono olona lehibe indrindra. Mahatsiravina izaitsizy tokoa izany ka mety hitarika tosidra izay hanala ny ain'ny olona toy izany. Na inona na inona zavatra iainanao, na mampatahotra anao aza ny toe-javatra, dia minoa finoana matanjaka foana.
Fomba 5 handresena ny tahotra
Halalino ny Tenin'Andriamanitra
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra handresena ny tahotra amin'ny maha mpino dia ny fananana vaovao marina. Halalino ny tenin'Andriamanitra hahalalanao ny fampanantenan'Andriamanitra rehetra amin'ny fiainanao. Ireo fampanantena ireo dia hampitaovana ny sainao ary hampahafantatra anao fa mahay mamaha ny tarehin-javatra rehetra Andriamanitra.
Tsarovy ny soratra masina milaza Fanisana 23:19 Andriamanitra tsy mba olona handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Efa nilaza ve Izy fa tsy hanao? Na efa niteny va Izy ka tsy hotoviny? Midika izany fa ho tanteraka ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ny fiainanao na inona na inona toe-javatra iainanao. Raha Andriamanitra efa nanome toky fa hanome izay rehetra ilainao araka ny haren'ny voninahiny amin'ny alalàn'i Kristy Jesosy ianao, dia tokony hatoky an'Andriamanitra fa hanao izany Izy.
Fantaro sy hatokisa Andriamanitra
Daniela 11:32 Ary izay manao ratsy amin'ny fanekena dia haringany amin'ny fandokafana; fa ny olona izay mahalala an'Andriamaniny kosa dia hahery ka manararaotra.
Milaza ny soratra masina fa ireo izay mahalala an'Andriamaniny dia hahery ary hitrandraka izany. Tsy afaka ny hahalala an’Andriamanitra ny olona iray ary tsy hatoky azy. Tokony hahafantatra an'Andriamanitra ianao, ary tokony ho fantatrao fa Mpamaly soa izay mazoto mitady azy Izy.
Ny fahatokiana an'Andriamanitra dia midika fa apetrakao amin'Andriamanitra ny fikarohanao rehetra. Avelanao ny fanahianao, ny tahotrao ary ny fanahianao rehetra satria manana an'Andriamanitra ianao. Rehefa tonga aminao ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana dia hatoky an'Andriamanitra ianao fa lehibe sy mahery Izy hamonjy anao. Ny soratra masina dia milaza hoe iza no miteny ary tonga izany rehefa tsy nandidy Andriamanitra. Iza no mandrahona ny ainao ho faty? Matokia an'Andriamanitra. Nilaza Izy fa tsy ho faty ianao fa ho velona hanambara ny asany amin'ny tanin'ny velona.
Mivavaha ao amin'ny Fanahy Masina
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra handresena ny tahotrao ny mivavaka amin'ny matoatoa masina. 1 Kôrintianina 14: 4 Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany; fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonana. Rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia mampiorina ny tenanay. Manangana ny tenantsika amin'ny sehatry ny fanahy isika.
Misy olona matahotra ny hijanona irery ao an-trano satria matahotra ny fanafihana ataon'ny fahavalo. Ity dia fomba iray hialana amin'izany tahotra izany. Andriamanitra tsy nanome antsika fanahin'ny tahotra fa ny maha Zanakalahy hitomany an'i Ahba ray. Rehefa miditra ao an-trano ianao dia apetraho amin'ny fanandevozana ny hery demonia rehetra amin'ny fivavahana amin'ny fanahy masina. Mampahery anao handresy ny tahotra izany.
Mitadiava fihavanana amin'Andriamanitra
Romana 8: 31 Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra is ho antsika, iza dia afaka ny ho manohitra anay?
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny fahavalo hamoaka ny fiainantsika amin'ny tahotra dia satria tsy mihavana amin'ny mpamorona antsika isika. Amin'ny fotoana anaovantsika fanovana amin'Andriamanitra, dia tsy afaka mifehy antsika intsony ny fahavalo. Tsy afaka matahotra intsony izay hataon'ny fahavalo amintsika isika satria marina eo imason'Andriamanitra.
Previous lahatsoratraFomba 5 hanalavirana ny fijangajangana ho mpitovo
Next lahatsoratraTeboka vavaka hialana amin'ny fitiavam-bola
Angela Thomas Sheffield Jiona 19, 2021 Ao amin'ny 8: 53 am
azafady mba hikasika ahy ary hifanaraka amiko amin'ny fahitana fandrosoana sy fanafahana ato an-tsaiko, ny tenako, ny fanahiko ary ny fanahin'ny fianakaviako. ho hitantsika eo amin'ny làlan'ny velona ny hatsaram-pon'Andriamanitra. mivavaha ho an'ny zanako lahy, Christian 19, mila mpitsabo biby. hanampy azy hahazo ny mpitsabo biby. mari-pahaizana mpanampy ary asa tsara ary ny volany.
ovay ho tsara ny tantarantsika mba hahafantaran'ny rehetra fa Andriamanitra eo anilanay izy, asehoy fa mahery amin'ny fiainantsika Andriamanitra, satria tianay ianao, manaja anao izahay, miandry anao ary izaho manantena irery, aminao izahay matoky sy miankina … Misaotra Tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Amena
Mary Zulu Jiona 23, 2021 Ao amin'ny 7: 54 am
Misaotra pastera amin'ny fampaherezana antsika Kristiana fa manana andriamanitra lehibe sy mahery tokoa isika. Misaotra an 'ANDRIAMANITRA izahay noho ny fiainanao, manome sakafo anay mandrakariva amin'ny teny.
Teboka 12 vavaka ho an'ny fahalalahana
Vavaky ny ady mba hanafoana ny didim-pitsarana